Kakabaveh oo lugu abaalmariyay qofka sannadka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Kakabaveh oo lugu abaalmariyay qofka sannadka
La daabacay fredag 16 december 2016 kl 15.46
"Soomaalidu xuquuq kuma leh waddanka"
Amineh Kakabaveh, xildhibaanad barlamaanka u fadhida xisbiga Vänsterpartiet. sawir: HENRIK MONTGOMERY / TT
Shalay galabnimadii ayuu wargeeyska magaciisu yahay Fokus shaaciyay in Amineh Kakabaveh xildhibaanad barlamaanka u fadhida xisbiga Vänsterpartiet noqonayso qofka sannadka ee joornaalkan.
Hasayeeshe sababta loo siiyay abaalmarintan maxeey tahay. Waxaa loo siiyay shaqada wanaagsan ay u sameeysay ka hor tagga xaqjirnimada iyo cadaadinta sharaf-dhowrka, waxaa af-iswiidhiska lugu yidhaahdo hedersförtryck. Waa sida wargeeysku soo qoray.
Dhanka kale ayey Amineh Kakabaveh dhowr bilood ka hor booggeeda Facebook soo dhigtay filim cunsureenaya soomaalida. Kan ayaa u jeeda in ay soomaalidu yihiin dad tuugo ah oo Iswiidhan u yimaada si ay uga faa´ideeystaan, balse wax ku soo kordhin bulshada.
Maqal Kahin Axmed siyaasi ka tirsan xisbiga Moderaterna degmadda Rinkeby-Kista ee magaalada Stockholm. Arrinka Kakabaveh ayuu dhowr jeer u gudbiyay booliska, hasayeeshe ayaa dacwooyinkan hoos loo dhigay. Wuxuu hubaa in arrinkan si kale looga doodi lahaa hadii xumaan laga sheegi lahaa qoomiyadaha kale.
-Hadii roomeerka amba dadka waddanka Finland ka yimid la caayi lahaa, dacwadani meel fog ayey gaadhi laheeyd. Laakin soomaalidu xuquuq kuma leh waddankan, ayuu sheegay Kahin Axmed siyaasi ka tirsan xisbiga Moderaterna degmadda Rinkeby-Kista.